လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ - Myanmar Network
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ
Posted by Kyawt K Khine on July 13, 2015 at 10:48 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်ဆင်ပြေပြေနေနိုင် ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ လေးဆယ့် ရှစ်နာရီလောက်က ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်တွေနဲ့ အတူဖြတ်သန်းရတဲ့ အချိန် တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေရင် အလုပ်ခွင်က စိတ်ပျက်ဖွယ်အတိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်းဆိုတာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးအမှီ သဟဲပြုပြီး၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဝိုင်းဝန်းကူညီ ပြီး ရှင်သန်ရပ်တည်နေကြတာပါ။ အလုပ် ထွက်ရခြင်းအကြောင်းအချက်တွေထဲမှာ တစ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတာကြမလဲဆိုတာ ဒီတစ်ပတ်မှာ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ လူအမျိုးမျိုး၊ စရိုက် အမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ အားလုံးညီညွတ်မှ အလုပ် ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြီးဆုံးအောင် လုပ်နိုင်မှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ကြင်နာမှု၊ အချင်းချင်း လေးစားမှုနဲ့ နွေးထွေးမှုတို့ကို ပြသပါ။ ကိုယ်က အားလုံးကို နွေးထွေးမှုမရှိဘဲ ဆက်ဆံမယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုံးတစ်ခုပေးဖို့ ကိုတောင် တွန့်တိုနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်က လုပ်ငန်းခွင်မှာ အထီးကျန်စွာ နေထိုင်သွား ရဖို့ သေချာသလောက်ပါပဲ။
ပြုံးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ နှစ်လိုဖွယ်အပြုံးတစ် ခုက လူတိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေပြေနေနိုင် စေတဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုံးတစ်ခုက လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ခင်မင်မှု၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အပြန်အလှန်ကူညီဖေးမမှုတွေ လွယ်လွယ် ကူကူရနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အသေးအဖွဲ့ကိစ္စလေးကအစ အလေး အနက်ထားကြောင်း ပြသပါ
ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောရင်း သူတို့တွေရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အစားအစာ၊ အကြိုက်ဆုံး အရောင်၊ အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်၊ အကြိုက် ဆုံး ရုပ်ရှင်၊ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းစတဲ့ သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ၊ ဝါသနာပါတဲ့ အရာတွေကို ဂရုတစိုက်မှတ်သားထားပြီး အခါခွင့်သင့်တဲ့အခါ သူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာတွေကို ကိုယ်ကဂရုတစိုက်နဲ့ မှတ် သားထားတယ်ဆိုတာကို ပြသခြင်းအား ဖြင့် ခိုင်မြဲတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို တည် ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားသူရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် အသိအမှတ်ပြုပါ
ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ယောက်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ထူးချွန် မှုတို့အတွက် အသိအမှတ်ပြုမှုကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။ ကိုယ့် ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က ရာထူးတိုးသွားလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ အလုပ် ကိစ္စအောင်မြင်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ပြုစကားကလည်း လုပ် ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကြားက ဆက်ဆံ ရေးကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေပါတယ်။ သူ့ရဲ့အောင် မြင်မှုအတွက် မနာလိုဝန်တိုဖြစ်မယ့်အစား မုဒိတာပွားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ဒီအ ချက်က ကိုယ့်ရဲ့ ဒုတိယအိမ်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ လူကောစိတ်ပါပျော်ရွှင်နိုင် မယ့် အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အချင်းချင်းလေးစား မှုက ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မြဲစေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို အဆိုးမြင်တဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေကို ရှောင် ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ သူက ကိုယ့်လောက် မတော်ဘူး၊ ကိုယ်ကသာ ဒီကုမ္ပဏီမှာ အရေးအပါဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်စတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ မောက်မောက်မာမာပြော ဆိုဆက်ဆံမှုတွေက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အပြန်အလှန်လေးစားမှုကို ပျက်ယွင်းစေ တာကို အထူးဂရုပြုစေလိုပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ မပတ်သက်တဲ့ လူတစ် ဦးချင်းရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့် ကို ဝေဖန်တာမျိုး ရှောင်ရပါမယ်။ ကိုယ်နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဝေဖန် ချက်ကြောင့် ခင်မင်မှုပျက်ပြားစေနိုင်ပါ တယ်။ ကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာ တစ်စုံတစ် ယောက်က ကိုယ့်အကြောင်း ပြောဆိုတာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကလည်း သူတစ် ပါးနောက်ကွယ်မှာ သူ့အကြောင်း အဆိုး မြင်တဲ့ဘက်က ပြောဆိုဝေဖန်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ အဆိုးမြင်တဲ့သူတစ်ယောက်၊ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ရှိသူတစ်ယောက်အနားမှာ မနေ ချင်ကြပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ကိုယ့် ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေ နေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကောင်းမွေး မြူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စကားကိုဖြောင့်မတ် မှန်ကန်စွာပြောဆိုတတ်ပြီး တစ်ပါးသူ အခက်အခဲကြုံလာချိန်တိုင်း နွေးထွေးစွာ ဖေးမတတ်သူ၊ မှန်ကန်တဲ့ အကြံÓဏ်တွေ ပေးတတ်သူ၊ အရာရာတိုင်းကို မျှဝေခံစား ပေးသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်ပင်နှီး နှောပါ
ကိုယ်က အဲဒီအလုပ်နဲ့ ဘယ်လောက် ပင် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေစေဦး ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အကြံဉာဏ် တောင်းတာမျိုး၊ သူတို့ရဲ့ အိုင်ဒီယာကို မေးမြန်းတာမျိုးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအလုပ် မှာ ဒီလိုလေးတော့ လုပ်ထားတယ်၊ ဘာလို အပ်မလဲ ကြည့်ပေးပါဦး..၊ ဒီပရောဂျက် မှာ ဘယ်လိုအိုင်ဒီယာလေးနဲ့ ဆန်းသစ် အောင်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ..စတဲ့ အကြံ ပြုချက်တောင်းတာမျိုးက လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက် ဆံရေးကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါ တယ်။
လုပျငနျးခှငျထဲမှာ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျော ကိုငျဖကျတှနေဲ့ အဆငျဆငျပွပွေနေနေိုငျ ဖို့ကလညျး အရေးကွီးတဲ့ အစိတျအပိုငျး တဈခုဖွဈပါတယျ။ တဈပတျမှာ လေးဆယျ့ ရှဈနာရီလောကျက ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျ ဖကျတှနေဲ့ အတူဖွတျသနျးရတဲ့ အခြိနျ တှဖွေဈပါတယျ။ အဲဒီမှာ တဈဦးနဲ့တဈဦး အဆငျမပွမှေုတှရှေိနရေငျ အလုပျခှငျက စိတျပကျြဖှယျအတိဖွဈနတေတျပါတယျ။
လုပျငနျးခှငျမှာ လုပျဖျောကိုငျဖကျ အခငျြးခငျြးဆိုတာ တဈဦးကိုတဈဦးအမှီ သဟဲပွုပွီး၊ တဈဦးကိုတဈဦး ဝိုငျးဝနျးကူညီ ပွီး ရှငျသနျရပျတညျနကွေတာပါ။ အလုပျ ထှကျရခွငျးအကွောငျးအခကျြတှထေဲမှာ တဈခကျြအပါအဝငျဖွဈတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျနဲ့ အဆငျပွအေောငျ ဘယျလိုနထေိုငျမလဲဆိုတာကွမလဲဆိုတာ ဒီတဈပတျမှာ ဖျောပွပေးသှားပါမယျ။
လုပျငနျးခှငျမှာ လူအမြိုးမြိုး၊ စရိုကျ အမြိုးမြိုးရှိပမေဲ့ အားလုံးညီညှတျမှ အလုပျ ကိုအောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ပွီးဆုံးအောငျ လုပျနိုငျမှာပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ တှကေို ကိုယျ့ရဲ့ကွငျနာမှု၊ အခငျြးခငျြး လေးစားမှုနဲ့ နှေးထှေးမှုတို့ကို ပွသပါ။ ကိုယျက အားလုံးကို နှေးထှေးမှုမရှိဘဲ ဆကျဆံမယျ၊ ကိုယျ့ရဲ့ အပွုံးတဈခုပေးဖို့ ကိုတောငျ တှနျ့တိုနမေယျဆိုရငျ ကိုယျက လုပျငနျးခှငျမှာ အထီးကနျြစှာ နထေိုငျသှား ရဖို့ သခြောသလောကျပါပဲ။
ပွုံးပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ နှဈလိုဖှယျအပွုံးတဈ ခုက လူတိုငျးနဲ့ အဆငျပွပွေနေနေိုငျ စတေဲ့ အစှမျးထကျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုဖွဈ ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အပွုံးတဈခုက လုပျဖျော ကိုငျဖကျတှရေဲ့ ခငျမငျမှု၊ တဈဦးနဲ့ တဈဦး အပွနျအလှနျကူညီဖေးမမှုတှေ လှယျလှယျ ကူကူရနိုငျမယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျး တဈခုဖွဈပါတယျ။
အသေးအဖှဲ့ကိစ်စလေးကအစ အလေး အနကျထားကွောငျး ပွသပါ
ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ စကားစမွညျပွောရငျး သူတို့တှရေဲ့ အကွိုကျဆုံး အစားအစာ၊ အကွိုကျဆုံး အရောငျ၊ အကွိုကျဆုံးစာအုပျ၊ အကွိုကျ ဆုံး ရုပျရှငျ၊ အကွိုကျဆုံးသီခငျြးစတဲ့ သူတို့ စိတျဝငျစားတဲ့အရာတှေ၊ ဝါသနာပါတဲ့ အရာတှကေို ဂရုတစိုကျမှတျသားထားပွီး အခါခှငျ့သငျ့တဲ့အခါ သူကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အရာတှကေို ကိုယျကဂရုတစိုကျနဲ့ မှတျ သားထားတယျဆိုတာကို ပွသခွငျးအား ဖွငျ့ ခိုငျမွဲတဲ့ ဆကျဆံရေးတဈခုကို တညျ ဆောကျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
တခွားသူရဲ့ အောငျမွငျမှုအတှကျ အသိအမှတျပွုပါ
ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတဈ ယောကျယောကျရဲ့ အောငျမွငျမှု၊ ထူးခြှနျ မှုတို့အတှကျ အသိအမှတျပွုမှုကလညျး အရေးကွီးတဲ့ အခကျြတဈခကျြပါ။ ကိုယျ့ ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျက ရာထူးတိုးသှားလို့ ပဲဖွဈဖွဈ၊ လုပျငနျးခှငျအတှငျးမှာ အလုပျ ကိစ်စအောငျမွငျသှားလို့ပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ရဲ့ ဝမျးမွောကျဂုဏျပွုစကားကလညျး လုပျ ဖျောကိုငျဖကျနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ကွားက ဆကျဆံ ရေးကို ပိုမိုခိုငျမွဲစပေါတယျ။ သူ့ရဲ့အောငျ မွငျမှုအတှကျ မနာလိုဝနျတိုဖွဈမယျ့အစား မုဒိတာပှားနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။ ဒီအ ခကျြက ကိုယျ့ရဲ့ ဒုတိယအိမျလို့ ဆိုနိုငျတဲ့ အလုပျခှငျမှာ လူကောစိတျပါပြျောရှငျနိုငျ မယျ့ အခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။
လုပျငနျးခှငျမှာ အခငျြးခငျြးလေးစား မှုက ဆကျဆံရေးကို ခိုငျမွဲစပေါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျကို အဆိုးမွငျတဲ့ အပွုအမူ၊ အပွောအဆိုတှကေို ရှောငျ ကဉျြသငျ့ပါတယျ။ သူက ကိုယျ့လောကျ မတျောဘူး၊ ကိုယျကသာ ဒီကုမ်ပဏီမှာ အရေးအပါဆုံး ပုဂ်ဂိုလျတဈယောကျစတဲ့ အတှေးတှနေဲ့ မောကျမောကျမာမာပွော ဆိုဆကျဆံမှုတှကေ လုပျငနျးခှငျအတှငျး အပွနျအလှနျလေးစားမှုကို ပကျြယှငျးစေ တာကို အထူးဂရုပွုစလေိုပါတယျ။
လုပျငနျးခှငျနဲ့ မပတျသကျတဲ့ လူတဈ ဦးခငျြးရဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ လှတျလပျခှငျ့ ကို ဝဖေနျတာမြိုး ရှောငျရပါမယျ။ ကိုယျနဲ့ မသကျဆိုငျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာဝဖေနျ ခကျြကွောငျ့ ခငျမငျမှုပကျြပွားစနေိုငျပါ တယျ။ ကိုယျ့နောကျကှယျမှာ တဈစုံတဈ ယောကျက ကိုယျ့အကွောငျး ပွောဆိုတာ မကွိုကျဘူးဆိုရငျ ကိုယျကလညျး သူတဈ ပါးနောကျကှယျမှာ သူ့အကွောငျး အဆိုး မွငျတဲ့ဘကျက ပွောဆိုဝဖေနျတာမြိုး မလုပျသငျ့ပါဘူး။
ဘယျသူတဈဦးတဈယောကျကမှ အဆိုးမွငျတဲ့သူတဈယောကျ၊ မကောငျးတဲ့ အကငျြ့ရှိသူတဈယောကျအနားမှာ မနေ ခငျြကွပါဘူး။ လုပျငနျးခှငျအတှငျးမှာ ကိုယျ့ ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ အဆငျပွပွေေ နခေငျြတယျဆိုရငျတော့ စိတျကောငျးမှေး မွူဖို့ လိုအပျပါတယျ။ စကားကိုဖွောငျ့မတျ မှနျကနျစှာပွောဆိုတတျပွီး တဈပါးသူ အခကျအခဲကွုံလာခြိနျတိုငျး နှေးထှေးစှာ ဖေးမတတျသူ၊ မှနျကနျတဲ့ အကွံÓဏျတှေ ပေးတတျသူ၊ အရာရာတိုငျးကို မြှဝခေံစား ပေးသူတဈယောကျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ အဆငျပွပွေေ လကျတှဲလုပျကိုငျနိုငျမှာ အသအေခြာပါပဲ။
လုပျငနျးကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး တိုငျပငျနှီး နှောပါ
ကိုယျက အဲဒီအလုပျနဲ့ ဘယျလောကျ ပငျ အကြှမျးတဝငျဖွဈနစေဦေး ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို အကွံဉာဏျ တောငျးတာမြိုး၊ သူတို့ရဲ့ အိုငျဒီယာကို မေးမွနျးတာမြိုးက လုပျဖျောကိုငျဖကျနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ ဆကျဆံရေးကို ပိုမိုကောငျးမှနျဖို့ အထောကျအပံ့ဖွဈစပေါတယျ။ ဒီအလုပျ မှာ ဒီလိုလေးတော့ လုပျထားတယျ၊ ဘာလို အပျမလဲ ကွညျ့ပေးပါဦး..၊ ဒီပရောဂကျြ မှာ ဘယျလိုအိုငျဒီယာလေးနဲ့ ဆနျးသဈ အောငျလုပျရငျကောငျးမလဲ..စတဲ့ အကွံ ပွုခကျြတောငျးတာမြိုးက လုပျငနျးခှငျမှာ လုပျဖျောကိုငျဖကျနဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ ဆကျ ဆံရေးကို ဖွဈစနေိုငျတယျလို့ ဆိုကွပါ တယျ။
Permalink Reply by Naing Lin Aung on July 14, 2015 at 1:24
Permalink Reply by Thu Zar on July 14, 2015 at 12:09
Permalink Reply by Thein Zaw @ မိုးခြိမ့်ညံ on July 14, 2015 at 12:17
Permalink Reply by Nangyu on July 14, 2015 at 16:47
Special thanks ;)
Permalink Reply by Aye Nyein Thu on July 14, 2015 at 16:51
Permalink Reply by Tin Linn on July 14, 2015 at 17:14
Permalink Reply by myinthlaing on July 14, 2015 at 17:16
Permalink Reply by Mary M H on July 14, 2015 at 18:14
ohh . thanks. everytime i read ur article i feel like u r talking about me. :D . thanks for sharing.
Permalink Reply by Kyawt K Khine on July 15, 2015 at 9:35
Permalink Reply by yin yin hla on July 14, 2015 at 20:27
Permalink Reply by Chit San Mg on July 14, 2015 at 22:37
I'm trying to smile :-) :-) :-) :-)
Permalink Reply by ZinLatWin on July 15, 2015 at 8:51